KU DHEJINTA "KUPROKSAT": SHARAXAAD, TILMAAMO ISTICMAALKA - SOOSAARKA DALAGGA
Fungicides waa kiimikooyin loo isticmaalo si loola dagaallamo cudurada dhirta fangas. Intaa waxaa dheer, iyada oo ay caawimaad, waxay abuur ku abuur ah ka hor beerto, burburinta kudka ee dulin on dusha sare. Kuwani waa caawiyayaal aad u fiican ee ninkii beerta ka shaqaynayay, inkasta oo dufankooda ay sun yihiin dadka iyo xayawaanka. Fungicides ayaa si ballaaran loo iibiyaa, sida cayayaanka caadiga ah. Aan eegno tilmaamaha isticmaalka daroogada "Kuproksat" - fungicide caadi ah.
Maaddooyinka firfircoon, foomka sii deynta, weelka
"Kuproksat" - walax aan kaadineed. Caadi ahaan waxaa loo yaqaannaa fungicides xiriiriyaha oo ku jira copper. Maaddooyinka firfircooni waa copper (II) sulfate, pentahydrate, oo ah qaybta ugu weyn. Waa mid dhexdhexaad ah oo keli ah oo keli ah. Nooca daawada - 34.5% diirad saarista. Fungicide waxaa lagu soo saaraa warshad balaastiig oo caag ah oo leh mugga 10 ama 25 litir, marmarka qaarkood waxaa suurtogal ah in la helo baako yaryar.
Dalagyada la kariyay
Dhaqanka ugu weyn ee lagu taliyey in lagu codsado Kuproksat waa:
noocyo kala duwan oo geedo tufaax ah;
Noocyo kala duwan oo geedo geedo ah;
Fungicide ayaa dhirta ka ilaalisa fungus badan, sida tufaaxa xayawaanka ah, canabta caleenta, caleemaha cagaaran, caleenta barafka, bataatada dambe ee bataatada iyo yaanyada, qajaarka peronosporaz, xayrta maqaarka, macrosporosis, rhizoctoniosis, gesto beetle ah iyo cudurrada kale ee kahortaga koritaanka dalagyada.
Ma taqaanaa? Fangaska mar walba ma ahan mid xun, mararka qaar faa'iido ayey leedahay. Tusaale ahaan, fangaska hunguriga hunguriga ah ayaa ka helay sumcad fiican ee biopeseed si loo burburiyo cayayaanka dhirta. Waxay awoodaan in ay qaadaan oo ay dilaan cayayaanka badan. Nasiib darro, waxaa jira dhinaca dambe ee kharashka. Xagga qarniyadii VIII-XIX, fangasku wuxuu "helay" silkworm oo wuxuu burburiyay xayawaanka yurubiyaanka ah, kaas oo wakhtigaasi keenay Yurub dakhli aad u fiican.
Maaddaama walaxda firfircoon iyo mabda'a hawlgalka, daroogadu waxay leedahay faa'iidooyin badan:
Ficil fara badan oo ficil ah.
Iska diid roobka.
Hogaamiyaha suuqa ee fungicides sababtoo ah waxtarka.
Ma ogolaanayo dib u soo noqoshada fungus pathogenic.
Waxay si fiican u la socdaan sunta cayayaanka kale ee isku dhafan taangiyada.
Badbaadin lagu kalsoonaan karo sababtoo ah sameynta filim qoto dheer oo caleemo ah.
Maqnaanshaha walaxda firfircoon.
Saameyn degdeg ah.
Isticmaalka bey'adda bey'ada.
Ku haboon in la isticmaalo, ma degaa, ma jajabiso faleereerka.
Kuubanka "Kuproksat" wuxuu awoodi karaa inuu ku dhaqmo xaalad kasta oo farsamo, xitaa heerkulka oo ka bilaabma 0 ° C ilaa 35 ° C.
Ficil ilaalin dheerad ah.
Dhamaan la'aanta phytotoxicity iyada oo si habboon loo isticmaalo.
Fungicide waxay dishaa xakamaynta iyada oo si toos ah loola xiriiro. Saamaynta wanaagsan ee isticmaalka Kuproksat natiijooyinka ka soo gala wakiilka firfircoon ee unugyada fangas fungal, taas oo ka xanaajisa hoos u dhaca horumarinta warshadda.
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in ion naxaasta galaan ficillo leh enzymes ee fungi pathogenic iyo hoos u dhigto hawshooda, naaquso hawlaha neefsashada. Natiijo ahaan, denaturation aan gaar ah ee borotiinka ayaa dhacaya, iyo nidaamkani waa mid aan ku haboonayn koritaanka noolaha. Copper sulphate waxay sii wadaa inay ku ururto kubadaha iyo unugyada ilaa ay si buuxda u burburaan.
Haddii ay dhacdo in cudurro horay loo soo saaray, waxtarka daawada "Kuproksat" ayaa dhici doona dhowr jeer. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in aan loogu talagelin daaweynta fangaska, laakiin ka hortagga, ciribtirka iyo ka hortagga muuqaalka.
fungicides Common waa Abig Fiinta Alirin B Albite, Gamair, Gliokladin, Quadris, bluestone, Ordan, oksihom, Atk, Nal, Thanos, Topaz, Trichoderma, fundazol, Fitolavin, fitosporin-M, Horus, Hom, Ridomil Gold.
Ka hor inta aadan codsan Kuproksat, waxaa lagama maarmaan ah inaad diyaariso xal shaqo. Waxbarashadu waa:
Si fiican u rux weelka una fur fur.
Cabbir qadarinta cadadka cayayaanka ee loo baahan yahay dhaqanka gaarka ah.
Ku buuxi faleebada biyaha, buuxi qiyaastii kala badh khadka.
Shubka cayayaanka ku rid shaashadda qalabka wax soo saarka dhaqanka.
Biyaha inteeda kale ku dar haanta rooga.
Waa muhiim! Ka hor intaadan isticmaalin faleereer si loo daaweeyo dalag, hubi inaad si fiican u biyo raaciso si aan lahayn wax ka haray cayayaanka hore.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo dhaqamada leh fungicide maalinta cad. Isticmaalka sunta cayayaanka laguma talinayo 2-3 saacadood ka hor roobka ama xilliga roobka. Dhirta waxaa muhiim ah in si siman loogu daboolo xalka shaqada iyadoo la isticmaalayo qalab gaar ah. Ha u oggolaanin arjiga farqiga ah ee xalka ee qaybaha qaarkood ee dhaqanka.
Heerarka isticmaalka ee diyaarinta Kuproksat waa sida soo socota: Tufaax, yaanyo iyo qajaar - 50 ml / boqol, canab - 50-60 ml / boqol, xididada sonkorta - 70 ml / boqol, rajo - 30-50 ml / boqol. Qadarka isticmaalka dareeraha shaqeynaya ee wax ku oolka ah ee lagu buufiyo dalaggu waa sidan soo socota: tufaaxa - 10 l / sot, qajaarka - 8-10 l / sot, yaanyada - 4-10 l / sot, canab - 10 l / sot, dabocase sonkorta - 4-6 L / sot.
Dhirta oo idil waa in la farsameeyaa inta lagu jiro xilliga sii kordhaya. Heerka buufinta waa sida soo socota: tufaaxa, dhalada sonkorta iyo yaanyada - 3, qajaarka - 2, grapevine - 4 jeer.
Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka "Kuproksat" ee canabku waa ka duwan yahay xeerarka loo adeegsado warshadaha kale. Tani waxay khuseysaa daaweynta ugu horeysa ee warshadda, taas oo sida ugu fiican loo sameeyo markii geedka canabka ah uu koray 20-30 sentimitir, iyo xajmiga caleemuhu wuxuu u dhexeeyaa 3 sentimitir dhexroor.
Daaweynta soo socota ee la yiraahdo fungicide ayaa door ka ciyaara booska oo waxaa loo sameeyaa sidii looga hortagi lahaa cudurka inta lagu jiro xilliga ubax ee dalagga. Waa in la sameeyaa marxaladda dabagalka inflorescences iyo strings of burooyinkeeda. Waxay badanaa ku dhacdaa mudo ah 7-12 maalmood kahor bilawga ubaxa. Kuproksat waxay bilaabmeysaa inay si dhaqso ah u isticmaasho codsigeeda.
Soo saaraha ayaa ka digay in, sababo nabadgelyo awgood, marka la shaqeynayo cayayaanka, haddana waa lagama maarmaan in la isticmaalo ugu yaraan maskaxaha, sababtoo ah iyada oo loo marayo habka neefsashada waxaa si degdeg ah u nuugaya sunta dhiigga, iyada oo la marinayso caqabada xanuunka. Dharka qofka ku hawlan dhaqameedka dhaqanka waa inuu ilaaliyaa jirkiisa intii suurtagal ah. Tani waxay sidoo kale khuseysaa dharka. Haddii kale, jirka waxaa laga yaabaa in lagu sumoobo kiimikooyin sun ah.
Horumarka ugu dambeeya ee dalaggu waa lagama maarmaan in la soo saaro ugu dambayn 3-4 toddobaad ka hor goosashada. Haddii kale, walxaha sunta ah waxay ku sii jiri karaan noolaha dhirta oo ku qaadi doona "miiska" qofka.
Waa muhiim! Waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo Kuproksat oo leh xawaaraha dabaysha ilaa 4-6 m / s. Ka fogow taabashada fangasaska leh dhaqamada xasaasiga ah ee dariska ah, sida ay u burburin karaan.
Dawadani waxay si fiican u shaqeysaa iswaafajinta noocyo badan oo cayayaanka ah iyo fungicides kale, kuwaas oo loo isticmaalo isla xilligaas. Inkasta oo soo-saaruhu uu ka digayo in ka hor inta aan la diyaarin isku-daridda taangiga si loo hubiyo in aadan waxyeello u geysan dhaqanka, waxaa lagama-maarmaan ah in la sameeyo tijaabo loogu talagalay la-qabsiga jidhka iyo kiimikada, xasilooni, iyo maqnaanshaha fal-celinta sunta.
Ha ku duubin isku darka taangiyada diyaarinta mudo dheer, waa in loo isticmaalo isla markiiba ka dib geedi socodka karinta.
Muddada habka ilaalinta
Wixii faytanka Kuproksat, muddada caadiga ah ee ficil badbaadin heerkulka caadiga ah (0-35 ° C) waa 7 ilaa 10 maalmood. Xaaladaha qaarkood, waxay socon kartaa ilaa saddex toddobaad. Inta badan waxay ku xiran tahay nooca fungus iyo dhaqanka laftiisa.
Daawada ma aha phytotoxic haddii loo isticmaalo si adag sida waafaqsan tilmaamaha. Waa qiimo gaar ah oo ay ku bixiso falanqaynta noocyo kala duwan oo geedo tufaax ah oo xasaasi u ah naxaasta: muddada ka dib marka ubaxu ka dhalato buufin, waxa loo yaqaan "grid" oo laga yaabo inay caleemaha iyo miraha u muuqdaan.
"Kuproksat" ayaa iska leh fasalka saddexaad ee sunta. Tan macnaheedu waxa weeye, iyadoo ku xiran isticmaalka qawaaniinta, ma keenayso waxyeelo aan loo baahnayn oo ah bini'aadamka iyo nuucyada kale, shimbiraha, fauna iyo dhirta. Laguma talinayo in la isticmaalo cayayaanka ku dhow mida biyaha ee ku nool kalluunka. Tani waxay si xun u saamayn kartaa iyaga.
Ka hor inta aan la buufin, dareen gaar ah waa in la bixiyaa si loo helo tiro ah shinni. "Kuproksat" waxa loola jeedaa fasalka afraad ee sunta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa lagula talinayaa in cayayaanka ay ku jiraan fogaan ugu yaraan 3-4 kiiloomitir oo laga soo qaaday dhaqanka la qabadsiiyay maalintii. Xaddidadani waxay badbaadineysaa shinni dhimasho.
Ma taqaanaa? Sannadkii 1885-kii, fangasiyihii ugu horreeyay ee dunida ayaa la abuuray. Qoraagu wuxuu ahaa aqoonyahan Faransiis ah Alexander Milard. Daroogada ayaa ah dareere Bordeaux ah si loo ilaaliyo geedka canabka ah.
Fungicide "Kuproksat", sida waafaqsan tilmaamaha, waa in lagu kaydiyaa mugdi, qabow, meel aan carruurtu gaarin heerkul ka ah 0 ° C ilaa 25 ° C. Nolosha shafka ah ee daroogada ayaa lagu muujiyay baakidhka asalka ah. Waa 2 sano laga soo bilaabo taariikhda soo saarista, oo ku xiran kaydinta saxda ah.
Soo saaraha daroogada waa shirkadda "Vassma" - waa shirkad caan ah oo ku taal suuqa suuqyada cayayaanka iyo waxyaabaha kale ee beeraha warshadaha.
Isticmaal nacasta "Kuproksat" si waafaqsan xeerarka - oo waxaad heleysaa goosashada wanaagsan, oo aan lahayn fangas fangas ah oo aan cabsanayn.